Fitsangatsanganana an-tsambo - Inona no toerana haleha voafidy indrindra? | Fitsangatsanganana tanteraka
Susana godoy | | Gresy
Raha te hanokana ny fiaramanidina ianao ary koa ny fiara na ny fiaran-dalamby, tsy misy toa ny filokana amin'ny iray amin'ireo fomba manokana indrindra amin'ny dia. Ny fialan-tsasatra fitsangatsanganana an-tsambo dia iray amin'ireo hevitra tokony hotanterahinao farafahakeliny indray mandeha amin'ny fiainanao. Mety ho dia tantaram-pitiavana raha tianao na fianakaviana, miankina amin'ny filan'ny tsirairay, fa amin'ny lafiny roa dia ho tanteraka ny fanantenantsika ny nofinay. Tsy tianao ve ny hahatonga azy ireo ho tanteraka?
Izany no antony aorian'ny fotoan-tsasatr'izao rehetra izao dia tsy maintsy ankalazaintsika ny fiverenan'ny dia amin'ny fomba mandeha. Amin'ny fahendrena eny, fa ny fanatanterahana ireo nofy noresahinay ireo ary nafenina hatry ny ela. Milaza aminareo rehetra izahay ny tombony amin'ny dia toy izany sy ireo toerana tianao hotsidihina.
1 Gresy: Iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana voalohany
2 Maninona no mandeha mitsangantsangana?
3 Fitsangatsanganana an-tsambo, rahoviana no hamandrihana?
4 Inona no tokony hataoko amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane
Gresy: Iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana voalohany
Na dia marina aza fa afaka miresaka toerana maromaro amin'ny endrika fialantsasatra fitsangantsanganana izahay, ny Nosy Greek dia iray amin'ireo toerana tena tianao. Tsy maninona raha efa nankany amin'io faritra io ianao, satria noho io fomba fitsangatsanganana io dia ho hitanao amin'ny fomba miavaka kokoa io. Ny Mediteraneana dia vatosoa hita foana ary toy izany, i Gresy no vato mamirapiratra indrindra ao aminy.. ny fitsangantsanganana gresy Izy io dia iray amin'ireo voafidy indrindra satria ity faritra ity dia manana harena arkeolojika tsy manam-paharoa, ka mamela antsika ireo sary izay haseho ao amin'ny retina.
Fa tsy izy irery ihany fa ny fijanonana ao Atena sy ny Acropolis ho iray amin'ireo hevi-dehibe, tsy manadino an'i Kreta, satria misy seranan-tsambo roa ho an'ny sambo fitsangantsanganana. Any no ahafahanao mitsidika ny lapan'i Knossos, izay hahagaga anao koa ny taolany sy ny hevi-dehibe amin'ny sivilizasiôna Hellenika. Azo antoka fa efa nandre momba an'i Mykonos ianao noho ny morontsiraka. Noho izany dia iray amin'ireo tontolo iainana voafidy rehefa mijanona amin'ny dia ataonao. Hifarana any Santorini miaraka amin'ny filentehany malaza. Ankehitriny dia ho azonao kely kokoa ny antony mahatonga an'i Gresy sy ny Mediteraneana iray amin'ireo toerana lehibe indrindra!
Maninona no mandeha mitsangantsangana?
Na dia toa fanontaniana iray aza izay hainay haverina ny valiny, dia hanome anao antony vitsivitsy izahay hamandrihana anao. Mazava isika fa ny sambo sambo Hitondra antsika any amin'ny toerana izay tsy mora idirana amin'ny alàlan'ny fomba fitaterana hafa. Izany no antony maha-zavatra tsy ataonao matetika, dia azonao atao ny miaina azy io bebe kokoa. Manomboka eo fanandramana manavao sy mamorona tanteraka izy io, hanana ny safidinao amin'ny fanaovana hetsika isan-karazany ianao nefa tsy miala amin'ny toerana iray. Satria eny amin'ny sambo dia hahita hetsika mandritra ny andro ianao, miaraka amin'ny lalao, fialamboly, fotoana fisakafoanana miala sasatra ary maro hafa. Natao ho anao hankafizanao ny zava-drehetra ny zava-drehetra!
Fitsangatsanganana an-tsambo, rahoviana no hamandrihana?
Ny zavatra tsara indrindra dia ny, toy ny dia rehetra mendrika ny sira, tsara kokoa ny manao ny famandrihana haingana araka izay tratra. Ny fandrosoana dia ny zavatra rehetra hahafahana mandamina tsara kokoa. Raha te hitahiry kely ianao, tsy misy tsara noho ny tsy fanaovana azy amin'ny vanim-potoana avo ary miandry hatramin'ny volana septambra hahita azy. Hatramin'izay, ny mari-pana ho an'ny teboka sasantsasany izay hotsidihinao dia ho ao anatin'ny faritra mora vidy kokoa hahafahanao mankafy ny dia rehetra amin'ny fahafenoany. Na dia marina aza fa mandritra ny taona dia azonao atao ny mametraka ny famandrihanao mifototra amin'ny zavatra ilainao. Satria raha manao dia lavitra ianao mianakavy dia mila toerana bebe kokoa ary tsara kokoa ny mandroso alohan'ny tsy misy toerana. Aza adino fa hisy foana ny tolotra azonao araraotina mba hitsimbinana kely.
Inona no tokony hataoko amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane
Raha vantany vao nifidy sy namandrika ny dianao ianao miaraka amin'ireo andro handanianao ny vakansy fitsangantsanganana dia mipoitra ny fisalasalana, satria tsy mbola nanao dia tamin'ity fomba fitaterana ity ianao. Aza matahotra anefa fa tsy misy hafa amin'ny an'ny hafa fantatrao. Ny zava-dehibe dia ny miala sasatra sy mankafy tanteraka ny tenanao satria ny sambo dia manana izay ilainao rehetra. Na dia marina aza fa ny antitra ny azonao atao dia ny maka akanjo samy hampahazo aina rehefa antoandro ary somary mihaja kokoa amin'ny alina. Natao hiondrana an-tsambo izany.
Fa rehefa manao ny fijanonana izay tiana hankafizinay izahay, dia tsara ny hamoahanao ny fomba faran'izay mahazo aina sy mahazatra anao. Noho izany dia tsy maintsy manao kiraro sahaza foana isika ary mety koa ny akanjo. Ho an'ity karazana fitsangatsanganana ity dia tadidio fa hitondra kitapo kely foana miaraka amin'ireo zavatra fototra, miampy tavoahangin-drano sy fiarovana amin'ny masoandro. Ataovy ao an-tsaina fa any amin'ny toerana sasany izay hitsidihanao dia tsy avelany hiditra amin'ny akanjo fohy loatra izy ireo ary zavatra tokony hodinihina izany. Azo antoka izao fa ho hainao tsara ny amin'izay alehanao, ny fitaovanao fitaterana ary ny fialan-tsasatra mahafinaritra miandry anao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fitsangatsanganana an-tsambo: Ataovy izay hahatanteraka ny nofinao rehetra!